माओवादीमा नारायणकाजी पक्षधरको निष्कर्ष : प्रचण्ड अब सुध्रिँदैनन्, सँगै बस्नुको अर्थ छैन ! • raradiodarpan.com
माओवादीमा नारायणकाजी पक्षधरको निष्कर्ष : प्रचण्ड अब सुध्रिँदैनन्, सँगै बस्नुको अर्थ छैन !
प्रचण्डको पछिल्लो कार्यशैलीलाई लिएर खास गरी माओवादी केन्द्रमा रहेका पूर्व एकता केन्द्र समूहका नेताहरू श्रेष्ठसहित लीलामणि पोखरेल, गिरिराजमणि पोखरेल, अञ्जना विशंखे, पेशल खतिवडा लगायतका नेताहरू रुष्ट बनेका हुन् । श्रेष्ठ रुष्ट बनेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड मंगलबार उनलाई भेट्न उनको निवास हात्तीवन पुगेका थिए भने बिहीबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्डको निवास खुमलटारमा दुई नेताबीच पुनः भेटवार्ता भएको थियो । दुवै भेटवार्तामा अध्यक्ष प्रचण्डले नेता श्रेष्ठलाई पार्टी विभाजनको बाटो नरोज्न आग्रह गरेका थिए । जवाफमा श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूमाथि बढाएको दबाब के हो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा प्रचण्डले अवेशमा आएर त्यसो भनेको जिकिर गरेका थिए ।
श्रेष्ठ निकट मानिएका नेता गिरिराजमणि पोखरेल घट्नाक्रमहरुले सोच्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको बताउँछन् । ‘हाम्रो चाहना पार्टी विभाजन गर्ने होइन, तर अहिले सोच्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो’, पोखरेलले भने, ‘महाधिवेशनले यथास्थितिमा एमसीसी पास नगर्ने भनेपछि उहाँले भनेको कुरा महाधिवेशनको लाइन हो वा हामीले भनेको महाधिवेशनको लाइन हो भन्ने कुराको फैसला हुनुपर्छ ।’ पोखरेलले आफूहरूले महाधिवेशनको स्प्रिटमा मात्रै चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारेको बताउदै शुक्रबारबाट हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफूहरु सहभागी हुने बताए । उनले विभिन्न पक्षबाट छलफल र कुराकानी भइरहेको भन्दै अहिले नै केन्द्रीय कमिटी बैठक बहिस्कार गर्ने वा फरक पार्टी घोषणा गर्ने भन्ने निर्णय भई नसकेको पनि बताए । ‘हामी अहिले नै कुनै निर्णयमा पुगेका छैनौ । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जान्छौ, बहिस्कार सहिस्कार गर्ने भन्ने त्यस्तो अहिले केही छैन’, पोखरेलको भनाइ छ । रातोपाटी संवाददाता